U-Apple uza kuqala kunye nabanini zabelo kwiSteve Jobs Theatre, Apple Park | Iindaba zeGajethi
Kwaye inyani kukuba ukumiliselwa kweemodeli ezintsha ze-iPhone 8, 8 Plus kunye ne-iPhone X zaziphethe ngokusemthethweni ukwazisa indawo emiselwe ngokusesikweni kuzo zonke iintetho kunye neminyhadala ye-Apple. Iqonga laseSteve Jobs, kufutshane nendawo enkulu ebiyelweyo yeApple Park, iya kuhlala ngoFebruwari 2018 ukufumana intlanganiso yabanini zabelo okokuqala kwimbali yayo.
Ngeli thuba lusuku olukhethelwe ukubhiyozela lo msitho ngu NgoLwesibini, ngoFebruwari 13 kwaye amandla kulindeleke ukuba agqitywe ngokufika kwabanini zabelo abaphambili benkampani. UApple uyaqhubeka nokusebenza eApple Park, kodwa okwangoku sele ineeofisi ezinabasebenzi kwaye ngokucacileyo iholo apho le ntlanganiso yabanini zabelo izakuqhubeka khona.
Ubalo lwenkampani, izindululo zabanini zabelo ngokwabo zokutyikitya kunye neminye imisebenzi yentlanganiso yabanini zabelo iya kuxoxwa okokuqala eApple Park, eyinto ebaluleke kubo bonke. Ukusukela ngalo mzuzu, abanini zabelo abanqwenela ukuya kumsitho banakho ukusebenzisa a ifom kwiwebhusayithi ka-Apple ukubhalisa nokuthatha inxaxheba. Kule meko, iApple phantse iqinisekile ukuba iSteve Jobs Theatre entsha iya kugqitywa ukwenza imisebenzi ebalulekileyo enje ivoti yeBhodi yaBalawuli yeApple, phakathi kweminye imicimbi yabatyali mali abaphambili.
Okucacileyo kukuba iinombolo zenkampani ziya kwamkelwa kuba ibiya kuba bubudenge ukungakwenzi oko, kodwa kukho imiphetho ebuyiselwe ngasemva kwaye enokuba nomzuzu wabo kule ntlanganiso, njenge ukudalwa kwekomiti yamalungelo oluntu kunye nengxelo malunga nokukwazi kwenkampani uku ukunciphisa iziphumo zegesi UTim Cook ngokwakhe uqinisekisile ngaphandle kwemigaqo-nkqubo emitsha yoRhulumente wase-United States. Ngamafutshane, kulindeleke ukuba ibe yintlanganiso ethe cwaka enomoya olungileyo ngokujonga iziphumo ezifunyenwe yiApple kwiinyanga ezidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » U-Apple uza kuqala kunye nabanini zabelo kwiSteve Jobs Theatre, eApple Park
I-Samsung Galaxy A8, itheminali enekhamera engaphambili kabini kunye ne-infinity Display screen